सकिएको हो ग्यारेथ बेलको समय?
नेपाल लाइभ मंगलबार, असार २, २०७७, १५:१०
काठमाडौं- स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडका प्रशिक्षक जिनेदिने जिदान र खेलाडी ग्यारेथ बेलबीच चलिरहेको ‘खराब सम्बन्ध’ को चर्चा अहिले फेरि चुलिएको छ। बेलले पाउने कम अवसर र पाएका अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा उनको आलोचनासमेत बढिरहेको छ।
कोरोना माहामारीका कारण रोकिएको ला लिगा सुरु हुने खबरसँगै खेलाडीहरुको अभ्यासमा बेलमाथिको आश बढेको थियो। २०१४ को च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा गोल गरेर उपाधि जिताएका बेल पछिल्लो समय हराइरहेका थिए। यसैले पनि अहिलेको अवस्थामा पाउने अवसर उनले उपयोग गर्न सक्छन् भन्ने अनुमान थिए। तर उनको खेल चल्न सकेन।
आइतबार ला लिगा अन्तर्गत आइबरविरुद्ध खेलको ६१औँ मिनेटमा रोड्रिगोको स्थानमा मैदान जाने अवसर पाएका बेलले आफूलाई खरो रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेनन्। पहिलो हाफमा नै तीन गोलको अग्रता बनाएको रियल मड्रिडले दोस्रो हाफमा गोल गर्न सकेन। बरु ६० औँ मिनेटमा एक गोल खान पुग्यो। खेलपछि प्रशिक्षक जिदानले दोस्रो हाफ निकै कमजोर रहेको भन्दै खेलाडीलाई सम्झाएका पनि थिए।
त्यसले पहिलेदेखि चिसिएको जिदान-बेल सम्बन्ध अझै सुधार हुन सकेन। रियल मड्रिडले उपाधि यात्रामा महत्वपूर्ण खेलाडीका रुपमा लिएको बेलको शैलीले प्रशिक्षकसँगै दर्शकपनि उनीबाट टाढिने खतरा बढिरहेको छ।
क्रिष्टियानो रोनाल्डो युभेन्टस लागेपछि त उनको स्थानका एकमात्र स्टार खेलाडीका रुपमा ग्यारेथ बेललाई नै हेर्न थालिएको थियो। तर घाइते रहने समस्यासँगै क्लबको अविश्वासले उनी त्यो भूमिकामा देखिन सकेनन्।
सन् २०१३ मा त्यसबेलाको विश्व कीर्तिमानी मूल्य ८५ मिलियन पाउण्डमा इंग्लिस क्लब टोटनह्यामबाट रियल मड्रिड आएका बेलको सम्झौता अझ तीन वर्ष बाँकी नै छ। उनले मड्रिडका लागि चार च्याम्पियन्स लिग, एक ला लिगा, एक कोपा डेल रे, चार क्लब विश्वकप र तीन युइएफए सुपर कप जितेका छन्।
रियल मड्रिडमा नै आफ्नो खेल जीवन बिताउन चाहेका बेलले यस्ता उपलब्धी क्लबलाई दिलाएका छन् भन्ने समेत छायामा परिरहेको छ। उनलाई प्रिमियर लिग क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड र टोटनह्याम, जर्मन च्याम्पियन बार्यन म्युनिख र चाइनिज सुपर लिग क्लबले समेत किन्न इच्छा देखाइरहेको समय उनी क्लब छाड्न चाहेनन्। अब नयाँ सिजन यसैगरी दबिएर बस्ने छन् या नयाँ बाटो रोज्नेछन् यकिन छैन।
‘कुनै व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण या कुनै रिसइबीका कारण होइन, म प्रशिक्षक भएकाले केही निर्णयहरु लिनै पर्ने हुन्छ, त्यसैले बेलले क्लब छाड्नु नै राम्रो छ’ जिदानले बेलको सम्बन्धमा यस्तो बताए पनि उनले क्लबको भविष्यसँग मात्रै बेलको खेललाई जोडेको जस्तो भने देखिँदैन। किनभने मैदानमा खेल देखाउँदा नै पनि उनी बेलका प्रशंसक थिएनन्।
बेल भर्सेस जिदानको धारणामा दुई भिन्न कोणबाट खबरहरु आइरहेका छन्। बेलायती सञ्चार माध्यममा बेलको भविष्यमा जिदानको खेलवाड जोडिएका छन् भने स्पेनिस मिडियामा कमजोर बन्दै गएको बेलको भूमिका बलियो रुपमा प्रस्तुत गरिएका छन्। यसमा मध्यमा रहेर हेर्ने हो भने दुवैबीच सन्तुलन देख्न सकिन्छ। बेललाई नचाहने जिदानको स्वभाव त देखिएकै छ तर विश्वस्तरीय खेलाडी बेलको भूमिका पनि सन्तुष्ट हुन मिल्ने छैन।
उपाधिकै हिसाबले हेर्ने हो भने त खेलाडीका रुपमा जिदानले रियल मड्रिडलाई जति दिलाएका छन् त्योभन्दा बढी बेलले जिताएका छन्। मड्रिडबाट बेलले १४ उपाधि जिताएका छन् भने २ जिदानले ६ उपाधि जिताएका थिए।
वेल्स राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने उनले इंल्याण्डमा देखाएको भन्दा माथिल्लो स्तरकै खेल स्पेनमा देखाएका हुन्। तर उनी न त जिदानले जस्तो भावनात्मक प्रभाव पार्न सफल रहे न त रोनाल्डोले जस्तो खेल प्रभाव।
रियल मड्रिडमा भन्ज्दा वेल्सको राष्ट्रिय टिमबाट खेल्नु आफ्ना लागि ठूलो महत्व र खुसीको विषय हुने बताएका बेलले अब राष्ट्रिय टिममा उही प्रभाव पारिरहन पनि मुस्किल देखिन्छ।
खेलमा बिध्रुप रूप : पदको झगडामा बक्सिङ संघ नेपाली खेलकुदमा संघहरुको विवाद नयाँ होइन। साधरणसभा नजिकिँदा विवाद बढ्ने र मिलिजुलि राजनीति गर्ने बेला विवाद मिल्ने भइरहन्छ नै। त्यस्... मंगलबार, साउन २०, २०७७
गफमा अल्झिएका सदस्यसचिव : ऐन नपढेका कि झुक्किएका? रमेशकुमार सिलवालले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को सदस्यसचिवमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेको ६ दिन भयो। अहिले राखेपमा बाँकी कामसँगै उनक... सोमबार, साउन १९, २०७७